Sida loo wareejiyo xogta ka iPhone jir si iPhone cusub 7/7 Plus | Wararka IPhone
IPhone 7 halkan ayuu joogaa, nooc kasta oo uu yahay. Waa inaan cusbooneysiinaa aaladaha hadaad ka mid tahay kuwa nasiibka yar ee awooda u yeeshay inay gacanta ku dhigaan iPhone 7 maalmahan. Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida xogta ka timid iPhone-kaaga hore illaa iPhone-ka cusub ee 7/7 Plus loogu raaco habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan. Sidaa darteed, ma waayi doonno macluumaadka aan ka haysannay iPhone-keena, sida sawirrada, fiidiyowyada iyo codsiyada, sababtoo ah waxaan go'aansanay inaan qaadno iPhone-kii ugu dambeeyay ee laga heli karo suuqa. Waxaan abuureynaa oo soo celineynaa keydkeena si aan uga faa'iideysano waqtiga keydinta aaladda.
Shakhsiyan, aniga iyo inbadan ayaa doorbidey inaan iskuwareejino sidii «nuevo iPhone«, Si aad u ilaaliso nadaafadda iyo hufnaanta nidaamka, oo aanad u jiidaya faylasha aan loo baahnayn ee ka imanaya nooc ka mid ah iOS-ka kan kale. Si kastaba ha noqotee, marka aan wax ka qabanno xog aad u sarreysa, tani waxay noqoneysaa mid aan macquul ahayn, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad dib u soo celiso kayd, gaar ahaan markaannaan haysan nuqulo nuqul ah kombuyuutarkeena / PC-ga ama si fudud sababtoo ah caajisnimada ayaa nagu soo socota, waxay kuxirantahay isticmaale su'aal Aniga shaqsiyan Waxaan ku amrayaa inaad u qaabeyso qalabka sidii iPhone cusub, laakiin weli, waxaan u socoto in aan ku bari doonaa sida loo wareejiyo xogta ka iPhone jir si aad iPhone cusub.
1 Tallaabooyinka lagu xisaabtamayo: Tallaabooyinkii hore
2 Taageero, marwalba iTunes
3 Ku wareejinta xogta iPhone-keena cusub 7
Tallaabooyinka lagu xisaabtamayo: Tallaabooyinkii hore
Ku cusbooneysii iPhone-kaaga hore nooca ugu dambeeyay ee la heli karo: Sababta aan tan u sameyno (haa, anigu caajis baan noqon lahaa sidoo kale), waa nuqulada nuqulada ee nuqul ka mid ah mid kale inuu sababi karo khaladaad, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad cusbooneysiiso iPhone-kii hore si aad u hesho ugu dambeeyay Dhab ahaan waa isku mid iPhone-ka cusub, nooca ugu dambeeya ee hada la soo saaray iPhone 7 waa iOS 10.0.1. Markaan cusbooneysiinno iPhone 7-geena, waxaan aadi doonnaa qeybta Guud ee Dejinta si aad u doorato Dib-u-dejinta oo masaxo dhammaan xogta.
Apple Watch? Taabo unpair: Waa inaan ka jabinaa Apple Watch-ka iPhone-ka haddii aanan dooneynin inaan dhibaatooyin la kulanno marka aan u adeegsaneyno Apple Watch qalabka xiga, iPhone 7.
Taageero, marwalba iTunes
Waa run inaan haysanno iCloud, laakiin si aan u kaydinno macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah waxaan door bidnay inaan adeegsanno iTunes, tan waxaan kugula talineynaa inaad ku xirto adoo adeegsanaya USB-gaagii hore ee iPhone-ka PC-ga / Mac-da shaqada saaran. Waxaan bilaabi doonnaa iTunes oo waxaan raadineynaa ikhtiyaarka aan ku abuuri karno keyd. Waxaa lagugula talinayaa inaan sameyno keyd adigoo calaamadeynaya sanduuqa «encrypt copia«, Sidan ayaan ku hubin doonnaa inaan ku wareejinno macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah feylka amniga, sida furaha sirta ah iyo xogta dalabka. Sidoo kale waa inaan hubinnaa in dhammaan iibsiyada loo wareejiyay iTunes, tan waxaan ku dhajinaynaa« faylka », ka dibna «aalladaha" Y "iibsiga wareejinta«.
Hadda waxaan si fudud u gujineynaa badhanka keydka si aan u bilowno keydinta, xaqiiqda ayaa ah in iTunes ay aad uga dhakhso badan tahay nidaamka daruurta ee ku jirta iCloud, oo aad uga ammaan badan.
Ku wareejinta xogta iPhone-keena cusub 7
Waqtigu waa yimid, waxaan ku jirnaa shaashadda qaabeynta ee iPhone 7. Waxaan u soconeynaa inaan dejino goobaha illaa iyo inta uu ka muuqanayo daaqadda "Apps & Data". Xaaladdan oo kale waxay na siin doontaa dhawr ikhtiyaar:
Soo Celinta kaabta iCloud
Soo Celinta kaabta iTunes
U deji sidii iPhone cusub
Bedelka xogta Android
Waxaan dooran doonaa ikhtiyaarka «Soo Celinta kaabta iTunes«, Sidan oo kale waxay na weydiin doontaa inaan ku xirno aaladda USB-ga PC-ga / Mac-ga oo iTunes horey u furmay. Markaad gudaha gasho, liistada ayaa ka muuqan doonta keydkeena ugu dambeeyay, waxaan dooran doonaa tan ugu dambeysay sababo muuqda awgood
Tani waa qaabka aan doorbido inaan isticmaalo, maxaa yeelay waxay siisaa cillado yar. Si kastaba ha noqotee, haddii aan nuqul ka sameysanay iCloud, ama aan dhowr keydinay, waxaan dooran karnaa "Soo Celinta iCloud backup", in kasta oo ay qaadaneyso wax yar ka dheer in dib loo soo celiyo sababo muuqda awgood.
Hadda waa inaan kaliya sug inta hawsha la qabanayo oo dhan oo waxaan horeyba ugaheli doonnaa xogteena iPhone-kii hore iPhone-kena 7, si aan ugu raaxeysanno sida ugu buuxda oo aan xad laheyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo wareejiyo xogta ka iPhone jir si iPhone cusub 7/7 Plus
iPhone nolol cusub. Aniga shaqsiyan markaan helo usbuuca soo socda waxaan u qaabeyn doonaa sidii iPhone cusub oo ku cusub taas, waa howl culus inaad lumiso macluumaadka oo dhan laakiin waxay la mid tahay noloshaada oo dhan waagii hore waxaad bedeshay mobiilkaaga xitaa waad lumisay xitaa dadka aad la xiriirto marka maxaa la yiri iphone nolol cusub
Waxaan jeclaan lahaa inaan xafido sawirada iyo xiriirada, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa iPhone cusub oo dhab ah. Dhibaatooyinka oo dhan, laakiin ma fiicna in dhammaan macluumaadka loo gudbiyo midka cusub, ma sameyn karaa?
Waan kari waayey, qof ma i caawin karaa? ka iphone 5s ilaa 7 oo lagu daray pc
Jawaab NOE LOZANO SORIANO
Hector Zancada dijo
waxaan sameeyay keydka sirta ah ee iphone 5. markaan isku dayo inaan soo celiyo si aan xogta ugu wareejiyo iphone 7 waxay ii sheegtaa in itunes aysan cusbooneysiin, waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo oo heesaha ayaa ii sheegaya inaan ku rakibo nooca ugu dambeeya ee la heli karo. maxaan sameeyaa
Jawaab Héctor Zancada
Waxaan hayaa Iphone 5 S waxaan sameeyay nuqulka oo sir ah wax walbana waa hagaagsan yihiin, laakiin markii aan rabay inaan soo celiyo suurta gal ma ahayn noocaas awgiis.
Jawaab Jorge Montenegro
Waa salaaman tahay, subax wanaagsan, EYE YE haddii aad eegto boggan kombuyuutarka ah wax walba waa ok, laakiin haddii aad ka eegto taleefankaaga gacanta marka aad siineyso inaad si toos ah u daawato fiidiyowga, waxaad ku qoran tahay FAMOBIL / FAMOVIL macluumaad la'aan taasi waa la bixiyaa. iyaga oo aan daawan fiidiyowga ama wax kaleba waxay kuu soo dirayaan farriin qoraal ah oo oraneysa.
Faahfaahinta VF: waad ku mahadsan tahay inaad iska diiwaangelisay Famovil oo aad siisay kooxaha saddexaad ee adeegga famovil.com ee ay bixiso shirkadda SISREMAS INFORMATICOS ESPABIT SL. .6.05 900820810 Toddobaadkiiba. Faahfaahin dheeraad ah / rukumo hoose: 6.05 XNUMX XNUMX ama Vodafone.es/pagotercros. Kaliya waxaan rabaa inaan kugu wargaliyo inay tani tahay wax isdabamarin, si kasta oo ay kuugu sheegaan Famobil / Famovil, diiwaangelintani waa mid aad u cad oo aan shaki ku jirin inay ku saabsan tahay alaabada lacag bixinta. Wax walba waa been, kuuma sheegaan adiga waqti kasta, kaliya SMS € XNUMX. Aniga dhankeyga, waxaa loo gudbiyaa xafiiska macaamiisha, haddii ay kugu dhacdo, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad soo gudbiso cabasho si aad u awoodo inaad ku dhammeyso FADEEXAD, FADEEXAD
Ku soo jawaab ONOFRE MARTORELL
Waxaan rabaa in aan ku kaydiyo dhammaan xogta Iphone 6-yada IOS 14.0.1 oo ay ku jirto encryption iyada oo loo marayo iTunes oo la cusbooneysiiyay nooca 12.10.9.3 oo leh xariggaygii asalka ahaa, iyada oo aan guuleysan. Waxay igu tuuraysaa inay u baahan tahay cusbooneysiin ama soo celinta iphone-ka. Waxaan si deg deg ah ugu baahanahay inaan keydiyo macluumaadkeyga si aan ugu xoojiyo taleefankayga iPhone 7. Fadlan soojeedinta xalka degdega ah.
Jawaab Bruno Widemann
Amiirad sheeko xariir ah oo midab leh, bilaashna u ah waqti kooban